Wantoota hedduu ramaddii tokko keessatti wallin makuun akka wanta baaqqeetti hojjetu taasisuu ni dandaama. Wantoota hundaa ramaddii keessaa akka baaqeetti sochoosuu fi ceesisuu ni dandeessa(for example, line size, fill color).
Ramaddiin-yeroo turu kan danda'u hanga wantootnni walmakan hundi filaman qofa.
Ramaddiin-garee kan turu hamma ibsi ajaja keessaa hin filaman qofa.
Tuuleen ramaddii biroo keessatti gurmaa'uu ni danda'u.Gochoonni ramaddii irratti hojooman hidhata iddoo dhuunfaa wantoota waliini isaanii gartuu keessaa irratti dhiibbaa hin fidu.
Wantoota ramaduu barbaaddee filuudhaan Ramddii-Fooyyessuu.
Fakkeenyaaf asxaa akka wanta baaqeetti sochoosuu fi deebisuun bal'isuu wantoota hundaa asxaa dhaabatichaatiinramaduun ni dandeessa.
Erga wantoota ramaddeen booda, kutaa ramaddii eenyyuuyyuu filuun ramaddii hundumaa fila.
Wantoota ramaddii keessa filuu.
Gartuu Seenuudhaan wantoota baaqee ramaddii keessa filuu ni dandeessa. Ramaddii seenuuf lama cuqaasi, filachuf ammoo wantoo irratti cuqaasi.Wantoota haala kanaan ramaddii dhaaf yookiin ramaddii irraa balleessuu yookiin ida'uu ni dandeessa.Wantoota kutaa ramaddichaa hin taane.
Ramaddii keessaa bahuuf, ala isaatti eessattiyyuu lama-cuqaasi.
Title is: Wantoota Ramaduu